Arsenal oo guul dirqi ah kaga daah furatay horyaalka Premier League … +SAWIRRO – Gool FM
Arsenal oo guul dirqi ah kaga daah furatay horyaalka Premier League … +SAWIRRO
(England) 11 Agoosto 2019. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa guul dirqi ah kaga daah furatay xili ciyaareedka cusub ee horyaalka Premier League 2019/2020, kaddib markii ay 1-0 kaga adkaatay Newcastle United.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro 0-0 ay labada kooxood isku dhaafi faayeen.
Qeybta labaad marka dib leysugu soo laabtay Arsenal ayaa la soo gashay garoonka qaab ciyaareed heer sare ah, waxayna raacdo u galeen sida ay ku dhalin lahaayeen goolka daah furka ee ciyaarta, maadaama ay u baahnaayeen in kulankooda daah furka ay ka helaan saddexda dhibcood.
Daqiiqadii 58-aad Pierre-Emerick Aubameyang ayaa hogaanka u dhiibay kooxda Arsenal, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1-0, kaddib caawin uu ka helay saaxiibkiis Ainsley Maitland-Niles.
Laakiin ugu dambeyntii kulanka ayaa wuxuu ku soo dhamaaday 1-0 ay guusha ku raacday kooxda ka dhisan waqooyiga magaalada London ee Arsenal oo kulankeedii ugu horeeyay ay kaga daah furatay horyaalka ka heshay saddexda dhibcood.
Shaxda rasmiga ah kulanka xiisaha badan horyaalka Premier League ee koxoaha Man United iyo Chelsea
Halyeey Man United ah oo kaga digay Pogba halista kaga imaan karta taageerayaasha Old Trafford hadii uusan….